Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny dia any Eropa • Vaovao momba ny dia any Finlandia • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Interviews • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia
Topi Manner ny CEO farany Finnair
Home » Lahatsoratra » Interviews » Interview: Inside ny sain'i Finnair CEO
Ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao Finnair, Topi Manner, dia nitafatafa tamin'ny Lehiben'ny mpandinika ara-bola ho an'ny CAPA - Ivotoerana ho an'ny fiaramanidina, Jonathan Wober. Niresaka momba ny lohahevitra maromaro izy ireo.
Eo amin'ny latabatra ny zava-misy ankehitriny momba an'i Finnair, momba ny fahaizany sy ny fifamoivoizany, ohatra.
Ny CEO CEO dia miresaka momba ny fiantraikan'ny COVID-19 sy ny fameperana ny dia ary koa ny fomba mety handroso.
Amin'izao fotoana izao, Finnair dia eo amin'ny 12 isan-jaton'ny haavon'ny toerana 2019, noho izany ny fiakarana sy ny fiakarana dia mila asa mafy sy fahadiovana.
Vakio hatrany ity resadresaka lalina natao tamin'i Topna Manner, CEO CEO Finnair ity, na mipetraha fotsiny ary mihaino amin'ny alàlan'ny rohy.
Manomboka amin'i Jonathan Wober an'ny CAPA - Ivotoerana fiaramanidina mandray an'i Topi Manner amin'ilay adihevitra.
Tsara, maraina ary tongasoa eto amin'ny fanontana CAPA Live hafa, ary faly aho miarahaba antsika Topi Manner, Lehiben'ny Executive Finnair. Topi, tongasoa ary misaotra anao nanatevin-daharana anay.
Misaotra anao, Jonathan. Tsara ny eto.
Te-hanomboka fotsiny aho amin'ny fanontaniako ny toe-javatra misy ankehitriny momba ny Finnair, ny fahaiza-manao, ny fifamoivoizana, sns. Efa niasa tamin'ny ambaratonga ambany dia ambany ianao. Ny herinandro ankehitriny, raha ny angon-drakitra avy amin'ny OAG sy CAPA dia milaza fa manodidina ny 12% amin'ny haavon'ny seza 2019 ianao amin'ny herinandro voalohan'ny volana Mey, izany. Eoropa amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 40%, noho izany dia ambany noho ny salan'isa eropeana ianao. Mahasosotra anao ve izany satria toa ambany dia ambany ny tahan'ny otrikaretina ary be ny tahan'ny vaksiny, saingy maninona ny governemantanao no tsy mahazo mifampiraharaha bebe kokoa, ary maninona no tsy afaka miasa amin'ny ambaratonga avo kokoa?
Ny tiako holazaina dia marina izany. Somary mahasosotra ihany ny hoe henjana tokoa ny fameperana ny dia any Finlandia, ary azo antoka fa misy fiantraikany amin'ny asanay izany. Hatramin'izao, miasa eo amin'ny 15% amin'ny fahafahantsika izahay ary ao anatin'izany ny sidina lavitra aziatika izay natombokay tamin'ny fahavaratra lasa teo. Ny tiako holazaina dia izao, manidina ho any Tokyo izahay, mankany Seoul, any Shanghai, ary mankany Bangkok sy Hong Kong. Ary io fifamoivoizana lavitra io dia tohanan'ny fangatahan'ny entanay. Ary nandritra ny vanin-taona mafana, noho izany vanin-taona mafana, dia efa hanafahana ny zavatra aho hoe ny voalohany famoahana ny vanin-taona mafana Network, ary izay ahitana fa mihevitra ny fiaramanidina ny zavatra toy 60 toerana, ary indrindra Eoropeana fohy ny fipetrany ho ao amin'ny sakafo . Ary manantena ihany koa izahay ny hampitombo ny sidina mankany Amerika Avaratra, ka mampitombo ny fahita matetika mankany New York ary koa mampiditra an'i Chicago sy Los Angeles.